मेगा आयाेजना निर्माणमा मेलम्ची एउटा विश्वविद्यालय बनाेस् ! - UrjaKhabar मेगा आयाेजना निर्माणमा मेलम्ची एउटा विश्वविद्यालय बनाेस् ! - UrjaKhabar
मेगा आयाेजना निर्माणमा मेलम्ची एउटा विश्वविद्यालय बनाेस् !
काठमाडाैं । निकै सकसपूर्ण अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयाेजनाकाे काम अन्तिम चरणमा पुग्याे । सुरुङ परीक्षण क्रममा एक इन्जिनियर र सवारी चालककाे ज्यान गयाे । सरकारले यसलाई सामान्य भवितव्य मान्याे वा दुर्घटना ? त्यसकाे गतिलाे अध्ययन हुन जरुरी छ । आयाेजना भविष्यमा निर्माण हुने मेगा प्राेजेक्टका लागि गतिलाे अध्ययनस्थल बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ ।
१- कुनै पनि देशका मेगा प्रोजेक्टहरूले केवल त्यो प्रोजेक्टमा कार्यरत प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरूको मात्रै प्रतिबिम्ब देखाउँदैनन् अपितु समष्टिगत रूपमा त्यो देशको सरकारको क्षमता, त्यस देशको शासकीय प्रबन्ध र त्यस देशका जनताको आयोजनाप्रतिको लगाव र सहयोगलाई प्रतिविम्बित गरेका हुन्छन् । सपना त लगभग सबै देशले देखेका हुन्छन् तर चीनको थ्री गोर्जेज जस्ता आयोजनाहरुको सफल निर्माण भने केवल चीनले, चीन सरकार र चीनिया जनताले मात्रै गर्न सक्छन् ।
२- विकासशील देशहरूले निर्माण गरीरहेका मेगा प्रोजेक्टहरूमा आउने समस्याबारे भएका गहिरो सोध, अनुसन्धानहरूले ती आयोजनाहरूमा हुने विभिन्न ६५ वटा समस्याहरू पहिचान गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रायः ती सबै समस्याको सामना गर्नुपरेकाे छ । त्यसैले यो आयोजना हाम्रा लागि एउटा विश्वविद्यालय पनि हो । के का लागि ?
• नेपालको कठिन भू-बनोटमा सुरुङ्ग बनाएको अनुभव नभएका नेपाली प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, अध्ययन/अध्यापनमा संलग्न प्रोफेसर र विद्यार्थीहरूको अध्ययनस्थल बनाउन ।
• ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव हासिल गर्न ।
• ठूला आयोजनाको निर्माण कार्यको कुसल व्यवस्थापन (Efficient Scheduling) को लागि आवश्यक अनुभव हासिल गर्न ।
• ठूला आयोजनाहरूमा समयको लागत अनुमान र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव हासिल गर्न ।
• ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धमा जेट विमान चलाउन कार चलाउने लाइसेन्सले पुग्छ कि जेट विमान चलाउने लाइसेन्स नै चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गर्न ।
• ठूला आयोजनाहरूमा हुने राजनीतिक चाँसो, खुराफात, सहयोग र असहयोग सम्बन्धी अनुभव र अध्ययन गर्न ।
• विकास आयोजनाहरूमा अन्तर निकायहरूबीच (विशेषगरी वन, भूमिव्यवस्था, प्रशासन र रक्षा (विष्फोटक पदार्थको लागि) को सहयोग वा अवरोध सम्बन्धी यथार्थ जान्न ।
• “यति ठूलो आयोजनाबाट मैले के पाएँ” वा “यसको काम गरेवापत मलाई के हुन्छ” भन्ने ‘रेन्ट सिकिङ्ग’ मानसिकताबारे ज्ञान हासिल गर्न ।
• आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय जनताको आशा, चाहनाहरूको सीमा र सो क्रममा सिर्जना गर्ने बाधा व्यवधानहरू बुझ्न ।
• नेपाल समृद्ध बन्न खोज्ने आयोजनाहरू शुरू गर्न लाग्दा I/NGO हरूले गर्ने विरोधका सम्बन्धमा बुझ्न ।
• आयोजनाहरूको माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने “धुपौरे”हरूको कारण आयोजनाले व्यहोर्ने क्षतिबारे बुझ्न ।
३- मेगा प्रोजेक्टहरूमा जाेखिम पनि मेगा नै हुन्छन् । तर, तिनको व्यवस्थापनका लागि सोचको स्केल पनि मेगा नै हुनुपर्छ । सफलताको जश जति सबै आफैं लिन खोज्ने तर असफलता चाँही सबै त्यहाँको योजना प्रमुख र कर्मचारीको जिम्मा लगाउने जस्तो ‘कल्चरले’ ती चुनौतिलाई कदापी चिर्न सकिँदैन ।
४- यस्ता आयोजनाको निर्माणको क्रममा हुनसक्ने कमी कमजोरी वा त्रुटीहरूको बारेमा गरिने मिहिन अध्ययन र अनुसन्धानले भविष्यकाे लागि महत्त्वपूर्ण अनुभवको खुल्ला रूपमा सहज पहुँच हुने वातावरण हुनुपर्दछ ।
अनुभव बाँडदा पनि खतरा हुने भएपछि त्यस्ता अमूल्य अनुभव व्यक्तिसँगै खरानी हुने अवस्था रहिरहेसम्म देशले उन्नतिको फड्को मार्ने कुरा सपना मात्रै हो । सुन्दर सिर्जना भयरहित वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । सिड्नी ओपेरा हाँउसका डिजाइनर जोन उडजनलाई त्यहाँको निर्माण मन्त्रीले तलब समेत नदिएर नलखेटेको भए विश्वले सिड्नी ओपेरा हाँउस जस्तै अरू थुप्रै सिर्जनाहरू प्राप्त गर्न सक्थ्यो ?
५- नेपालमा कुनै समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानबारे थाहा भइसकेपछि “यस्तो यस्तो गर्नु पर्थ्यो । यो यो गर्नु पर्ने हो नि” भन्ने After Thought विज्ञहरू बग्रेल्ति छन् । तिनीहरूबाट समस्याको कुनै समाधान हुँदैन । तर, तिनले समस्या बल्झाउन चाँही मजाले सक्छन् । ‘कुटो कोदालोले माटो कोपरेको’ समेत नदेखेकाहरू सुरुङ्ग विज्ञ हुन सक्छन् । कुनै पनि कुराको छानबिन वा समाधानका लागि त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूभन्दा बढी अनुभवि विज्ञ हुनैपर्छ ।
६- नेपाली समाज थामस अल्बा एडिसनले १२ सय चोटी असफल भएपश्चात विद्युत् बल्ब बनाएको हो भनेर उपदेश र भाषण दिनमा गर्व त गर्दछ । तर, आफ्नो बच्चाले कुनै विषयमा कम नम्बर ल्यायो वा फेल भयो या कम्प्युटरको माउस बिगार्‍यो भने पनि उसलाई निकै तनाब दिन्छ । त्यही भएर यहाँ कोही थामस जन्मेनन् ।
७- आयोजनाको स्थिति बुझ्न जाँदा ज्यान गुमाउन पुगेका कर्मठ इन्जिनियर सतिस गोइत र उनका सवारी चालकलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । घाइते इन्जिनियर र सहयोगीको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । तर, यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाको कामकै सिलसिलामा ज्यान गुमाउदा पनि सरकार वा नेतृत्वको तर्फबाट कुनै पनि राहतको घोषणा गर्न नसक्नु भने एकदम दुःखद छ । कस्ता-कस्ता घटनामा पनि १० लाख राहत वितरण गरेको सरकारले यो घटनामा केही पनि घोषणा गर्न नसक्नुले हामी कहाँ छौ भन्ने देखाउँछ ।